म्याराडोना फोटोग्राफरमाथि जाइलागे »	ख्यालख्यालमै खेलाडीबीच मुक्का »	'असन्तुष्ट दलसँग तीन दिनभित्र वार्ता’ »	Saturday, May 18, 2013 दृष्टिकोण
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको इच्छा
अवध क्षेत्रका मठ मन्दिरहरूमा तीर्थाटनका लागि निस्किएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भैरहवामा पत्रकारहरूमाझ दिएका अभिव्यक्ति मिडियामा निकै रोचक प्रस्तुतिका रूपमा आए । आफू राजनीतिज्ञभन्दा पनि राजाकै रूपमा रहन इच्छुक रहेको, आफूले नारायणहिटी छाडेपछि देशको स्थिति झनै दुरावस्थातिर गएको र नेपाली जनताले नयाँ शक्तिको खोजी गरिरहेको उनले बताएपछि धेरैले यसलाई धार्मिक आवरणमा थालिएको ज्ञानेन्द्रको राजनीतिक यात्राका रूपमा समेत विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । ज्ञानेन्द्रको सार्वजनिक अभिव्यक्तिपछि ँराजा आऊ देश बचाऊ’ भन्दै आएका पूर्वराजावादी स्वाभाविक रूपमा हषिर्त देखिएका छन् ।नागरिकको भूमिकालाई स्विकारेका पूर्वराजाका जुनसुकै अभिव्यक्तिलाई आवश्यकताभन्दा बढी महत्त्व दिने वा विरोध गर्ने दुवै प्रवृत्ति आलोच्य छन् । ज्ञानेन्द्र पनि नेपाली नागरिक भएकाले उनले आफ्नो मनमा लागेका कुरा व्यक्त गर्न पाउनु स्वाभाविकै हो । उनले बोलेका सबै विषय सही वा वैज्ञानिक हुन्छन् या हुनुपर्छ भन्ने छैन । उनको दृष्टिकोण पूर्ण रूपमा गणतन्त्रवादी एवं जनपक्षीय हुन्छ भनेर अनुमान लगाउनु वस्तुसंगत हुँदैन । समय र युगको मागलाई स्वीकारेर नागरिक बनेका ज्ञानेन्द्रलाई ँराजा’ हुँदाको स्मरण आउने र त्यसैअनुरूप कल्पनामा रमाउने छुट पूर्ण रूपमा दिइनुपर्छ । पूर्वराजाका सबै अभिव्यक्ति वा कुण्ठालाई शक्ति हत्याउन खोजेकै अर्थमा लिने परम्परा एकातिर राजावादीहरूमा छ भने अर्कातर्फ गणतन्त्रवादीहरू पनि यस्ता अभिव्यक्तिबाट त्यत्तिकै झस्कने गरेका छन् ।गणतन्त्रवादी शक्तिहरूमा आएको विभाजन, संविधानसभाको असफलता, राजनीतिक अस्थिरता, अराजकता र भ्रष्टाचारका कारण जनतामा आएको नैराश्यतामाथि पूर्वराजा र पूर्वराजावादीले खेल्न खोज्नु स्वाभाविक छ । कमल थापाले खुलेआम संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गरिरहेका छन् र लोकतन्त्रमा यसलाई अस्वाभाविक मान्न र उनीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन मिल्दैन । यस्तो परिवेशमा नागरिसरह बनेका ज्ञानेन्द्रले देशमा नयाँ शक्ति चाहिन्छ भन्दै आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ दल खोलेर त्यसको अध्यक्ष नै भए भने पनि त्यसलाई लोकतन्त्रले निषेध गर्दैन । पूर्वराजाले जनताको विश्वास जितेर बहुमत पाएर प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति पनि चलाउन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले रोक लगाउँदैन । तर, बलपूर्वक सत्ता कब्जा गर्ने वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प खोज्ने कार्यलाई मात्रै वर्जित मान्नुपर्छ ।पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले नारायणहिटी छाडेपछि मुलुकको राजननीति झनै बिगि्रएको दाबी गरेका छन् । तर, उनले सत्ता सम्हाल्दा देशमा कुनै राम राज्य थिएन भन्ने नेपाली जनताले अनुभूत गरेको विषय हो । शाही शासनकालमा विदेश भ्रमणमा उनी आफैँ र उनका मन्त्रीहरूले कति ठूलो धनराशि खर्च गरेका थिए, दरबारको भत्ता बढाएर कति बनाइएको थियो र मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी दुरुपयोग गरिएको थियो भन्ने प्रमाण पनि इतिहासमा लिपीबद्ध भइसकेको छ । यो अवस्थामा जनताले नयाँ राजनीतिक शक्ति खोजेको छ भनिरहँदा पूर्वराजाले आफू ँपुरानो शक्ति’ हुँ भन्ने भुलेको देखिन्छ ।लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै सबै विचारहरूले जनतामा जान पाउनु र आफ्ना तर्कहरू राख्न पाउनु नै हो, यसमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई मात्रै बन्देज लगाउनु समन्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । तर, पूर्वराजाले आफूलाई समयको गतिभन्दा उल्टो हिँडाउने कुचेष्टा गर्नु उनकै लागि हितकर हुँदैन । उनी साँच्चै नागरिक भएका हुन् भने फेरि ँराजा’हुने दिवास्वप्न छाडेर नागरिककै रूपमा रहने प्रतिबद्धता जनाउन जरुरी छ । यसो गरे भने मात्रै उनीमाथि जनताले सहानुभूति जनाउने छन्, अन्यथा शक्तिको भोक मेटाउन खोज्दा बेलायतका राजाले दुःख पाएको इतिहास नेपालका पूर्वराजाले पनि पक्कै पढेको हुनुपर्छ ।ज्ञानेन्द्र शाहले गणतन्त्रमा भन्दा आफ्नै कार्यकालमा शासनव्यवस्था राम्रो थियो भनिरहेका वेला एमाले नेता मदन भण्डारीको अभिव्यक्ति स्मरणीय छ । भण्डारीले खुलामञ्चबाट राजालाई श्रीपेच फुकालेर चुनावमा आउन भनेका थिए । ज्ञानेन्द्र शाहसँग अहिले श्रीपेच छैन, अब उनलाई जनता आफ्नो पक्षमा छन् भन्ने लागेको छ भने संविधान निर्माणपछि हुने प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उनी भाग लिन स्वतन्त्र छन् । Add new comment अयोग्य नेतालाई समयले फाल्छ
नेपालमा मानिसहरू दिनभरि चौरमा बसेर भ्रष्टाचार भयो भन्दै भाषण गर्छन् । यसरी भ्रष्टाचारको अन्त्य हुँदैन । तर, समस्या छन् भनिसकेपछि ती समाधान गर्न नसकिने पनि हुँदैनन् । प्रत्येक समस्या समाधान गर्न सम्भव हुन्छन् । भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न मैले अर्थमन्त्री हुँदा के सोचिरहेको थिएँ भने अर्काे बजेट ल्याउन पाएँ भने भ्रष्टाचारविरुद्ध केही महत्त्वपूर्ण सुधारको घोषणा गर्नेछु ।पहिलो, नेपालमा भ्रष्टाचार नगद कारोबारमा अर्थात् नोट बोकेर भइरहेको छ । ९३ प्रतिशत कारोबार नगदबाटै भइरहेको छ, ७ प्रतिशतमात्रै चेक, एटिएम आदिमा हुन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा पाँच वर्ष या १० वर्षभित्रमा नगद कारोबार अन्त्य गर्ने र जम्मै कारोबार चेक, एटिएम, डेभिड कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदिबाट गर्ने घोषणा गर्छु भन्ने लागेको थियो । त्यसपछि अर्काे पाँच वर्षमा देशका ठूला सहर र व्यावसायिक केन्द्रहरूमा यस्तो व्यवस्था गर्छु । हुम्लामा यस्तो ५० वर्षपछि गरे पनि हुन्छ । किनभने त्यहाँ हाम्रो वित्तीय कारोबारको गणनामा आउने हिस्सा नै छैन त्यहाँ । हामीले काठमाडौं र अन्य इनेगिनेका १०/१५ ठाउँबाट यस्तो व्यवस्था गरिदिने हो भने धेरै मात्रामा सिस्टममा आइहाल्छ । यसो गरेपछि एकले अर्कालाई भुक्तान गरेको सबै हिसाब रेकर्ड हुन्छ र त्यहाँनेर बद्मासी हुन पनि पाउँदैन र कसैले कर छल्न पनि पाउँदैन ।दोस्रो, घरजग्गाको पास घरैमा बसेर अनलाइनबाट गर्ने प्रणालीमा गयो भने कम्प्युटरले घुस माग्दैन । अहिले सबैभन्दा बढी घुसखोरी जग्गाको कारोबारमा हुँदोरहेछ । घुस खाने कर्मचारीले पनि किन्नेचाहिँ त्यही जग्गा नै हो । उसले मालपोतको प्रायोजनका लागि थोरै बिल लेख्छ, तर भित्र लेनदेनचाहिँ बेसी गरिरहेको हुन्छ । कम्प्युटरबाट अनलाइन प्रणालीमा जाने हो भने लुकाएर पैसा घटाउने प्रणालीमा को जान सक्छ ? सक्दैन । त्यसैले घरैमा बसेर अनलाइन ट्रेडमा जाने र आफैँ पि्रन्ट गरेर लालपुर्जा निकाल्न पाउने हो भने माल अड्डाहरूमा हुने बद्मासी अन्त्य हुन्छ । बरु यसका लागि केही ब्रोकर एजेन्सी वा सर्भिस एजेन्सीहरू ठाउँ-ठाउँमा खोल्ने, मान्छे त्यहीँ गएर आफ्नो अनलाइन कारोबार गर्छन्, मालपोतमा जानै पर्दैन ।तेस्रो, गाडीहरूको किनबेच गर्दा दर्ता, नामसारी वा वाषिर्क शुल्क घरैमा बसेर अनलाइनबाट वा एटिएमबाट गर्न सकिने प्रणालीमा जाने हो भने यातायात कार्यालय वा श्रम कार्यालय जानै पर्दैन । कर तिर्दा पनि यसै गर्न सकिन्छ । मैले यस्तो कोरियामा देखेँ । सीधै कर मेसिनबाट आउने-जाने गर्न सकिँदोरहेछ । कार्डबाट तिर्ने, सरकारलाई आउने सरकारमा आउँदोरहेछ, होटलवालाले पाउने एउटै कार्डबाट व्यक्तिकोमा जाँदोरहेछ । यी जम्मै कुराहरूमा हामीले सुधार गर्दिनेबित्तिकै देशमा भ्रष्टाचार एकाएक तल र्झछ । नीतिगत भ्रष्टाचार केही बाँकी रहला, त्यो त विकसित देशहरूमा पनि हुनेगर्छ । जस्तो कि पर्यटन मन्त्रीले म त्यहाँनेर एयरपोर्ट खोल्दै छु, तिमी छेउछाउमा हाउजिङ खोल भनेर पहिल्यै लिक गर्दियो भने त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । यस्तोखालको भ्रष्टाचार भोलि पनि रहला, तर जनसम्पर्क कार्यालयहरूमा हुने भ्रष्टाचारलाई चाहिँ धेरै मात्रामा कमी ल्याउन सकिन्छ । यसका लागि हामीले देशभित्र प्रविधिलाई निर्यात गर्नुपर्छ । नेतृत्वको भूमिका
नेपालमा विकासका बाधकहरू के-के हुन् भन्नेबारे विश्लेषण गर्दा नेतृत्व -व्यक्ति) पनि ठूलो कुरा रहेछ । हुन त एउटा व्यक्तिले प्रगति गर्ने हो भन्ने मानिसहरूले मान्दैनन् र सामूहिक प्रयास हो भन्छन् । तर, नेतृत्वको भूमिका धेरै हुँदोरहेछ । जस्तो, कोरियामा पाकचुङ हीले यस्तै गन्जागोलमा नेतृत्व लिएका हुन् । कोरिया पनि हामीजस्तै युद्धबाट आएको देश थियो । तर, उनी यति 'डेडिकेटेड' रहेछन् कि १९७९ मा आफ्नै गार्डद्वारा गोली खाएर मर्नुपूर्व उनले ५९ डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको देशलाई दुई हजार डलरसम्म पुर्‍याए । आज त्यहाँको प्रतिव्यक्ति आय २३ हजार सात सय पुगेको छ । त्यही ठाउँमा सैन्य शासन चलाउने पाकचुङ हीले कोरियालाई त्यस्तो सम्पन्न बनाए । त्यसवेला कोरियनहरूको सपना फिलिपिन्सजस्तो हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने रहेछ । तर, आज फिलिपिनोहरूचाहिँ कोरियाजस्तो हुन पाएहुन्थ्यो भनिरहेका छन् । फिलिपिन्समा पनि मार्काेसले सैनिक शासन चलाएका थिए । तर, त्यो देश आज कोरियाभन्दा धेरै तल छ भने कोरियाचाहिँ यतिमाथि पुगिसक्यो । त्यसैले देश विकासमा नेृतत्वको भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण हुँदोरहेछ । मेरोचाहिँ के अनुभव छ भने पाँच-सातजना मात्रै दूरदृष्टि भएका, इमानदार मन्त्री हुने हो भने बाँकी २४ सै घन्टा घुस खाएर बस्ने भए पनि देश बन्छ । महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको नेतृत्व हो । हाम्रो देशमा यस्तो इमानदार नेतृत्वको एकदमै खाँचो छ । नेतृत्व इमानदार भएन भने देश बन्दैन ।
नेता नै भ्रष्ट भएपछि
हाम्रो देशमा नेतृत्वमा रहेकै मानिस भ्रष्ट भए । बहुदल आएपछि भ्रष्टाचारविरुद्धका मुद्दा क-कसमाथि उठे भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ । पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू नै भ्रष्ट भए भनेपछि देशमा आर्थिक शुद्धीकरणको काम कसले गर्छ ? भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ कसले गर्छ ? के कर्मचारीले माग गर्न मिल्छ ? कर्मचारीलाई पनि नेतृत्व गर्ने त नेताहरू नै हुन् । राजनीति नै खराब भएपछि तल कर्मचारीहरू भ्रष्ट भए भनेर उम्किनु गलत हो ।उदाहरणका लागि सुडानकाण्डलाई नै लिन सकिन्छ । सुडानकाण्डमा सामान डाइरेक्ट खरिद गर्न पाउने भनेर क्याबिनेटले निर्णय गरेको रहेछ । तर, कतिपय नियम संशोधन गर्न लैजाने मन्त्रीहरू म यसमा दोषी छैन भनेर बोलिरहेका थिए । त्यसो भए के त्यो फाइल कसैले नल्याइकन आफैँ दौडिएर आयो र क्याबिनेटबाट निर्णय भयो ? यसका लागि विभागीय मन्त्री जवाफदेही हुन्छ कि हुँदैन ? मलाई के लाग्छ भने त्यो जम्मै काम गर्ने नीति निर्माताहरू नै हुन् । तर, दोषीचाहिँ प्रहरीका आइजिपी मात्रै हुन् भनेर अहिले कारबाही भएको छ र राजनीतिक नेतृत्वचाहिँ चोखो ठहरिएको छ । तर, सुडानकाण्डको सबै काम मिलाइदिने तारतम्यचाहिँ क्याबिनेटले गरेको छ । अनि यसमा क्याबिनेटमा बस्ने मान्छे, फाइल ल्याएर सदर गराउने मान्छेहरू यसमा जवाफदेही हुन्छन् कि हुँदैनन् ? यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । यसमा राजनीतिक नेतृत्व प्रस्ट रूपमा जवाफदेही हुनैपर्छ ।एकीकृत माओवादीले पनि सुरुदेखि नै पैसा भएपछि क्रान्ति हुन्छ र जे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता बोकेर आयो, यो सर्वथा गलत थियो । त्यसकारण माओवादी नेतृत्वमा पैसा आर्जनका निम्ति भोक सवार भयो । यसैले गर्दा ब्यारेकमा कमान्डरहरू आफैँ भागेर हिँड्नुपर्ने दिन पनि आयो । प्रचण्डका लागि सेना र प्रहरीलाई गुहारेर सुरक्षित हुनुपर्ने दिन पनि आयो । योभन्दा दुःखद् क्षण के हुन्छ ? त्यसकारण इमान र नैतिकताको भूमिका कति हुन्छ र नेतृत्वको निष्कलंकता कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा यसले पनि परीक्षा गर्छ । प्रणाली पनि दोषी
समयले अयोग्य नेतालाई फालेर योग्य मान्छेलाई ल्याउनैपर्छ/ल्याउँछ । कतिपय समस्यालाई प्रणालीले पनि ठीक गर्छ । यो संसदीय प्रणालीले पनि नेताहरूलाई किनबेच गर्न बाध्य बनायो । बहुमत नभइकन प्रधानमन्त्री हुन नपाउने, अनि प्रधानमन्त्रीमा बहुमत पुर्‍याएर टिकाइराख्नका लागि जम्मैलाई खुवाई-पियाई गरेर टिकाउनुपर्ने । त्यसैले यो प्रणाली पनि कतै न कतै दोषी छ । सीधै जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने प्रणालीमा जाने हो भने सायद यस्तो सम्झौता धेरै गर्नुपर्दैन कि ? त्यसैले हामीले केही कुरामा प्रणालीगत परिवर्तन पनि ल्याउन जरुरी छ ।तर, यसो गर्दा पनि नेताचाहिँ फेरि खराब पनि आउन सक्दारहेछन् । मार्काेसले देशलाई तल धसाए । त्यही वेलामा महेन्द्रले नेपालमा ०१७ साल ल्याएका हुन् । त्यही वेला पाकचुङ हीले कोरियामा सैनिक तानाशाही चलाएका हुन् । मार्काेसले फिलिपिन्समा शासन गरे । दुईवटाले देश रसातलमा पुर्‍याए, एउटाले देशलाई माथि आकाशमा पुर्‍याए । त्यसैले व्यक्तिको भूमिका पनि धेरै महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ ।अब हाम्रो नेतृत्वले आफ्ना कार्यकर्तालाई अब हामीले गर्नुपर्ने काम यो हो है भनेर एकदम प्रस्टताका साथ सिर्जना र विकासतर्फ लगाउनुपर्छ । जुलुसे मान्छे भेट्यो भने जुलुस गर्नु ठीक भन्ने र कारखानाका व्यवसायीलाई भेट्दा हड्ताल गर्नु खराब हो भन्ने दोधारे नेताले देश बनाउँदैन । अब पार्टीहरूको स्कुलिङ र 'ओरियन्टेसन' नै बदल्न जरुरी छ । Add new comment माओवादी विभाजनमा बाबुरामको भूमिका
एकीकृत माओवादी विभाजनमा जिम्मेवार को ? विभाजन भएको दुई साता बित्दा पनि बहस/चर्चा जारी छ । पार्टी विभाजनमा प्रचण्ड र किरणको भूमिकाको विषयले चर्चा पायो । पर्दा पछाडि पार्टी विभाजनमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको हातबारे अहिले नै बोल्नु हतार पनि हुन सक्छ । तर, विभाजनमा पार्टी उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको भूमिका कस्तो छ ? यो विषय खासै चर्चामा आएको छैन ।घटनाक्रमको विकासलाई हेर्ने हो भने प्रचण्ड र किरणजत्तिकै बाबुराम पनि विभाजनका लागि जिम्मेवार छन् । सैद्धान्तिक मतभेदसँगै पार्टीभित्रको साधनस्रोत र सत्ताको उपयोग विभाजनको महत्त्वपूर्ण कारण थियो । बाबुराम प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्ड-बाबुरामबाट किरणहरूलाई साधनस्रोतको उपयोगमा गरिएको निषेधको राजनीतिले विभाजनको आधार बलियो पार्‍यो । बाबुराम प्रधानमन्त्री भएकै दिनदेखि देखापरेको विवाद विभाजनसम्म पुग्यो तर, साधनस्रोतको उपयोगमा प्रचण्ड-बाबुराम पक्षबाट त्यसलाई स्वाभाविक गराउने काम भएन । सत्ताको उपयोग राजनीतिको एउटा मूल अंश हो । मन्त्रिपरिषद् गठनका वेला किरणजीहरूलाई उपेक्षा गरिएकोमा प्रचण्डले एबिसी टिभीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा सार्वजनिक रूपमै महसुस गरिसकेका छन् । माओवादी विभाजनमा बाबुरामको भूमिका कस्तो रह्यो ? केही प्रसंग हेरौँ, बाबुराम ११ भदौमा प्रधानमन्त्री हुनुपूर्व १० भदौको मध्यरात माओवादी-मधेसी मोर्चाबीच चारबुँदे सहमति भयो । यसमा फरक मत राखेको किरण पक्षले चारबुँदेलाई 'राष्ट्रघाती' भन्यो । यसको अर्थ थियो, बाबुराम प्रधानमन्त्री भएकै दिनदेखि माओवादीमा विवादको जन्म । प्रधानमन्त्री भएपछि शान्ति र संविधान आफ्नो प्रमुख मिसन बनाएका बाबुरामले १५ भदौमा माओवादी सेनाका हतियार रहेका कन्टेनरको साँचो विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरे, जहाँ किरण पक्षको विरोध भयो । प्रधानमन्त्री भएको एक साता नबित्दै प्रचण्ड-बाबुरामसँग किरणको दूरी बढ्दै गयो । साँचो हस्तान्तरणलाई निशस्त्रीकरण, बृहत् शान्तिसम्झौता, अन्तरिम संविधान र पार्टी निर्णयविपरीत देखेको किरण पक्षले देशभक्त जनमुक्ति सेनालाई निशस्त्रीकरण गर्नु राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद भन्यो । प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गर्दै किरण पक्षले १६ भदौमा साँचो प्रकरण विरोध गर्दै चक्का जाम र मसाल जुलुस निकाल्यो । सरकारले दमन गरेको भन्दै बाबुरामको आलोचना भयो । जब १६ भदौमा पार्टीकै लेटरप्याडमा किरण-बादलले प्रचण्डको विज्ञप्तिको खण्डन गर्दै संयुक्त विज्ञप्ति निकाले र भने, 'संस्थापन पक्षमा राजनीतिक रूपले न्यूनतम इमानदारिता रहेन ।' त्यसैवेला २७ भदौमा सरकारले जनयुद्धकालमा कब्जा गरिएका र फिर्ता हुन बाँकी घरजग्गा फिर्ताका लागि लिखित निर्देशन दियो, त्यहाँ पनि किरण पक्षले फिर्ता नगर्ने भन्यो । बाबुराम निर्णय गर्दै र किरण विरोध गर्दै जाने भयो । त्यसको प्रभाव मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा देखा परेको थियो । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा किरण पक्ष सरकारमा गएन । कारण थियो, मधेसी मोर्चासँग भएको सहमतिमा फरक मत । त्यति नै वेला आरसिपीले पार्टी फुटाउन किरणहरूलाई उस्काएको आरोप लगाउँदै प्रचण्डको लेख आयो, जसले विवादमा मल नै हाल्यो । लेखमा उनले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी अफ अमेरिका -आरसिपी) ले माओवादी फुटाउन प्रयत्न गरेको दाबी गरेका थिए । शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढाउन एकपक्षीय रूपमा लडाकु पुनवर्गीकरणमा पठाउने सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा किरण पक्षको आपत्ति नै आयो । ठीक त्यसैवेला राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई दाउमा राखेर सरकार बनाउनु र टिकाउनुको कुनै मतलव नरहने भन्दै किरणले डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकारमाथि प्रश्न उठायो, जसले बाबुराम-किरणबीचको दूरीलाई अझै बढायो । त्यही वेला प्रचण्ड-बाबुरामले कन्टेनरको साँचो विशेष समितिलाई बुझाउने निर्णयमा गल्ती भएको स्वीकार गरेे विवाद अन्त्य हुने किरण पक्षको प्रस्ताव आयो । कोर्स यतातिर गएन, बरु किरण-बादलले आत्मालोचना गर्नुपर्ने कुरा संस्थापनबाट उठाइयो । विवाद जारी नै थियो, त्यत्तिकैमा १ माघमा केन्द्रीय समितिमा प्रचण्ड र किरणले प्रस्तुत गरेका छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव थाती राख्दै विवाद अस्थायी रूपमा हल गरियो । त्यहाँ 'नयाँ संविधान निर्माण र सेना समायोजन समानान्तर ढंगले सम्पन्न गर्ने, चार आधार चार तयारीसहित तात्कालिक कार्ययोजना र कार्यक्रम बनाउने निर्णय' थियो । त्यसलाई कार्यान्वयनभन्दा पनि एकपक्षीय रूपमा सेना समायोजनमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बाबुरामका चासो भयो र किरण पक्षको विरोध । किरणहरूलाई सरकारमा ल्याउन २४ माघदेखि बसेको स्थायी समिति बैठकमा संस्थापन पक्षले मन्त्रिमण्डलद्वारा पुनगर्ठनको प्रस्ताव त अगाडि सार्‍यो, तर सरकारसँग दूरी बढ्दै गएको अवस्थामा किरण पक्षले यसलाई अस्वीकार गर्‍यो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि किरण पक्षले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै माग्न थाले । तर, १८ फागुनमा बोलाइएको सबैभन्दा पछिल्लो स्थायी समिति बैठकमा प्रचण्डले बाबुरामको राजीनामा गराउन नसकिने बताएपछि विवादको पारो उक्लिने क्रम बढ्यो । यसरी बढेको पारोलाई किरण पक्षको केन्द्रीय सदस्यको २८ र २९ फागुनमा बसेको बैठकले संस्थागत गर्दै भन्यो, 'अब पार्टी र सरकारविरुद्ध सडक, सदन र पार्टीभित्रै संघर्ष हुन्छ ।' सिपी गजुरेलको नेतृत्वमा 'संयुक्त राष्ट्रिय जनसंघर्ष समिति, नेपाल' गठन गरियो र बाबुरामविरुद्धको संघर्षलाई अगाडि बढाइयो । चैत ४ मा 'संयुक्त राष्ट्रिय जनसंघर्ष समिति, नेपाल' का नाममा होटल र्‍याडिसनमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी नेतृत्वविरुद्ध औपचारिक रूपमा 'फायरिङ' भयो, बाबुराम नेतृत्वको सरकार ढाल्नका लागि । सरकारले जनविरोधी र राष्ट्रघाती काम गरेको आरोप लगाउँदै उसविरुद्ध सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गर्ने भनियो । ६ र ७ चैतमा संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्यको बैठकले भने किरण पक्षले शान्ति र संविधान भाँड्ने गरी संघर्षका कार्यक्रम ल्याएको आरोप लगायो । प्रचण्डले सहमति जुटाउन गरेका सबै प्रयासमा किरण पक्षको एकसूत्रीय सर्त रह्यो 'बाबुरामको राजीनामा ।' तर, बाबुरामले सत्ता छाड्ने मनस्थिति नै बनाएनन् । बाबुरामको राजीनामा माग्ने किरणहरूको मागमा आफ्नै निवास पुगेका पत्रकारसँग ९ चैतमा प्रचण्डले भने, 'किरण पक्षले शान्तिप्रक्रिया भाँड्न खोज्यो ।' यतिवेलासम्म प्रचण्ड आफैँ पनि अप्ठ्यारोमा थिए, उनले चाहेकै भरमा बाबुरामलाई फिर्ता गराउन सक्ने अवस्था गुमिसकेको थियो । एकपछि अर्को गरी संघर्ष बाबुराम-किरण पक्षकै प्रधान बन्न गयो । १० चैतमा किरण पक्षले १२ वटा पार्टी/मोर्चासँग मिलेर 'संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समिति नेपाल' गठन गरे । प्रचण्डले किरणहरूलाई फकाउन १३ चैतमा केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरे पनि किरण पक्षले विगतका निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै अस्वीकार गर्‍यो । त्यहीवेला संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्यको बैठक १५ चैतमा बस्यो र शान्ति र संविधानका लागि दुई महिना जनपरिचालनको कार्यक्रम घोषणा गरेर बाबुराम नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने आधार बनाइदियो ।यही वेला सांगठनिक समस्या बढ्दै गए । किरण पक्षले १५ चैतमा मजदुर संगठनमा समान्तर समिति बनायो । बाबुराम नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रघाती र जनविरोधी भन्ने किरणहरूको भनाइलाई संस्थापन पक्षले राजनीतिक मूल्य र मान्यताभन्दा बाहिरको भन्यो । तर, यसमा किरणको आपत्ति भयो । अझ २० चैतमा नेवा राज्यको प्रशिक्षणमा आफ्नै नेतृत्वको सरकार ढालेर किरणहरूले प्रतिक्रियावादीहरूको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन थालेको प्रचण्डले आरोप लगाएपछि सरकारलाई मुद्दा बनाएको किरण पक्षलाई थप झस्कायो । बाबुराम चाहिँ यसमा प्रतिक्रियाविहीन थिए । दक्षिणपन्थी भनेर चिनिने केपी ओली र रामचन्द्र पौडेलसँगका किरणहरूले गरेका वार्तातर्फ प्रचण्डको संकेत थियो । शान्ति र संविधानविरोधी भनेर प्रचार गरेपछि किरण पक्ष असन्तुष्ट देखियो र भन्यो, 'हामीलाई शान्ति र संविधानविरोधी भनेर संस्थापन पक्षले वर्ग दुस्मनलाई सहयोग पुर्‍याएको छ ।' सबैभन्दा ठूलो संकट २८ चैतमा सेना समायोजनका विषयमा भएको निर्णयले गरायो, जुन निर्णयले माओवादी सेनाका शिविर, हतियार र लडाकु नेपाली सेनाको मातहत पुर्‍याएको थियो । किरण पक्षले उक्त कदमलाई 'कम्युनिस्ट आन्दोलनमा गद्दारी' भन्यो तर, संस्थापन पक्ष पूर्णतः यसको बचाउमा लाग्यो र भन्यो- किरणहरूमा दक्षिणपन्थी संशोधनवाद, जडसूत्रीय संशोधनवाद, व्यक्तिवादी अराजकतावाद, वामपन्थी लफ्फाजी र संकीर्णतावाद छ । त्यसका विरुद्ध विचारधारात्मक संघर्ष गरिन्छ । सांगठनिक काममा पनि चासो राखेको किरण पक्षले ११ वैशाखमा अनमिनद्वारा अप्रमाणित लडाकु, अवकाशप्राप्त लडाकु र वाइसिएललाई संगठित गरी जनस्वयंसेवक परिचालन ब्युरोलाई पुनर्गठन गर्‍यो । १९ वैशाखमा दुई समूहले १२३औँ मजदुर दिवस काठमाडौंमा भिन्नाभिन्नै ब्यानरमा मनाए, प्रचण्डपक्षीय मजदुर संगठनले खुलामञ्चमा र किरण पक्षले अन्य साना वाम दलसँग मिलेर वसन्तपुरमा मनाए । किरण पक्षले २१ वैशाखको पाँचबुँदे सहमतिमा आपत्ति जनायो । १० जेठमा किरण र महासचिव बादललेे विज्ञप्तिमार्फत संविधानसभाको म्याद थपका लागि प्रस्ताव गर्ने संस्थापन पक्षको निर्णयमा असहमति जनाए । म्याद थपका लागि सरकारले विधेयक दर्ता गरेको थियो । १७ र १८ जेठमा किरण पक्षका केन्द्रीय सदस्यको बैठकले १ असारमा राष्ट्रिय भेला बोलायो । उसले संविधानको नयाँ निर्वाचनको विरोध त गर्‍यो नै सर्वपक्षीय गोलमेच सभा, अन्तरिम सरकार र त्यसैमार्फत नयाँ संविधान बनाएर राजनीतिक निकास निकाल्ने प्रस्ताव अगाडि सार्‍यो । सरकार र माउ पार्टीबाट भएका कुनै पनि निर्णयमा किरणहरूको साथ खोजिएन, निरन्तर निषेधको राजनीतिलाई बढाइरहे बाबुरामले । मोटो र पातलो मसालको बिरासत बोकेका बाबुराम-किरणको संघर्ष नै माओवादीभित्रको विवादको खेल भइरह्यो । दिल्लीदेखि ब्राजिल भ्रमणमा बाबुरामकै चासो रह्यो । यस्तै विवादका बीच ३१ जेठमा संस्थापन पक्षबाट एकताका लागि सातबुँदे प्रस्ताव किरण समूहलाई हस्तान्तरण गरियो तर ३२ जेठमा किरण समूहले संस्थापन पक्षको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दर्ै ६ बुँदे जवाफ दियो । २ असारमा किरण पक्षको राष्ट्रिय भेला सुरु भयो । ५ असारमा नेकपा-माओवादी गठनको घोषणा भयो ।आफू प्रधानमन्त्री भएका वेला पार्टी फुट्दा पनि बाबुरामलाई कुनै असजिलो महसुस भएन, उनले धोबीघाट गठबन्धनका सहयोगीहरूको भूमिकाको नजरअन्दाज गरे र यो फुटका बारेमा भने, 'बाटो बिराएर केही साथी बाहिर गएका छन्, पछि फर्केर आउँछन् ।' Add new comment अबको विकल्प : संसदीय निर्वाचन
संविधानसभाको अवसान भएपछि एकपटक नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा चार पार्टीको बैठक भएको थियो । प्रचण्डले केही कुरामा असहमति भए पनि सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्नुभएको थियो । तर, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले जुनजुन विषयमा असहमति भएको छ, त्यहीँबाट सहमतिको सुरु गर्नुपर्छ भनेर भाँजो हाल्नुभयो । केही विषयमा असहमति छन्, छलफलको माध्यमबाट तिनको निराकरण गर्न सकिन्थ्यो । छलफलको वातावरण तयार हुँदै गर्दा निर्वाचनबाट बनेको सरकारलाई मात्र सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कुरा आयो । त्यहाँबाट सहमतिको प्रयास रोकिन पुगेको छ र त्यहीँबाट राजनीतिक सहमतिको प्रयास असफल भएको हो । अहिलेसम्म हामीले राजनीतिक सहमतिका निम्ति पार्टीका बीचमा आह्वान गरिसकेका छौँ र राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ । राष्ट्रिय सहमतिका निम्ति आन्दोलित हुन जनतालाई आह्वान गरेका छौँ । प्रतिपक्षी दलहरूले भनिरहेका छन्, प्रधानमन्त्री कुर्सी छोड्न तयार हुनुपर्छ । निस्वार्थ रूपमा बाबुराम हट्नुपर्छ । सहमतिको विकल्प छैन र अन्तरिम संविधानमा पनि राष्ट्रिय सहमति उल्लेख भएकाले अन्तरिम संविधानअनुसार दलहरूको सहमतिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ । बाबुरामजीले नै आफू कामचलाउ प्रधानमन्त्री हुँ भन्नुभएको छ । यस्तो अवस्थामा राजीनामाको जरुरी छैन । उहाँले राष्ट्रपतिसमक्ष पद छोडे×ँ भन्नुपर्‍यो । राष्ट्रिय सहमतिका निम्ति प्रयत्न गराँै भन्नुपर्‍यो । त्यसपछि अन्तरिम संविधानको धारा ३८ -१) बमोजिम सहमतिको सरकार बनाउने गरी दलहरू अगाडि बढ्नुपर्छ ।
अन्तरिम संविधानमै 'राजनीतिक सहमतिको आधारमा' भनिएकाले निकास के हुन्छ र अब के गर्ने भन्ने सबै काम दलहरूकै हो । प्रधानमन्त्रीले जुन किसिमको अडान राख्नुभएको छ, त्यसले देशलाई समस्यामा पार्छ । त्यसैले देशलाई समस्यामा पर्न नदिनकै लागि पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध आन्दोलनको विकल्प छैन, आन्दोलन अगाडि बढ्छ । जनमत बुझ्दै राष्ट्रपतिले पनि आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । जनता कुनै पनि निरंकुश शासनपद्धतिको पक्षमा छैनन् । उनीहरू स्वतन्त्रता चाहन्छन्, अधिनायकवादी र निरंकुशतावादी सोचलाई परास्त गर्न चाहन्छन् । धु्रवीकरणले कहिलेकाहीँ राम्रो ठाउँमा पनि पुर्‍याउँछ, कहिलेकाहीँ नराम्रो ठाउँमा पनि । अहिले संविधानसभा पनि क्रियाशील नभएको अवस्थामा सत्ताकब्जा गर्नुपर्छ, ब्रह्मलुट अझै मच्याउन पाइन्छ, मनोमानी निरंकुशता लागू गर्ने मौका यही हो भनेर एमाओवादी र मधेसी मोर्चा लाग्ने हो भने त्यसको प्रतिकार गर्नैपर्छ । त्यसका विरुद्ध अन्य दल पनि एकताबद्ध हुनैपर्छ । अप्ठेरो अवस्थामा एउटा परिस्थितिको बाध्यताले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा बाबुरामजी पुग्नुभयो । आफ्नो निरंकुश शासन चलाइराख्न अनेक हतकण्डा अपनाउन थाल्छन् भने त्यसको भण्डाफोर गर्नैपर्छ । विभिन्न किसिमका आरोप लाग्छन् भने त्यसको खण्डन गर्दा प्रत्यारोप हुन्छ । अन्तर्विरोधको सक्रियताको कुरा गर्दा आरोप-प्रत्यारोप पनि हुन सक्छ । तर, अहिलेको वेला आरोप-प्रत्यारोपभन्दा पनि सहमतिको हो । सहमतिबाटै देशलाई निकास दिनुपर्ने दायित्व राजनीतिक दलहरूको काँधमा आइपरेको छ ।
सरकारको नेतृत्व कांग्रेसबाटै
बाबुरामजीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार अब बन्न सक्दैन । हामीले पाँचबुँदे सहमति गर्दा र त्योभन्दा पहिले सातबुँदे सहमति गर्दा पनि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने सहमति गरेका थियौँ । जसअनुसार सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म पनि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्नुपर्छ भन्ने सहमतिबाट हामी पछाडि हटेका छैनौँ । सहमतिविना नै प्रधानमन्त्रीको नाम अगाडि सार्दा सत्तालोलुपताको आरोप लाग्न सक्छ भनेर नाम अगाडि नसारिएको कांग्रेस सभापतिले हामीलाई भन्नुभएको छ । सहमति हुनासाथ कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ । राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधानको धारा ३८ -१) अनुसार गठन हुने सरकार असंवैधानिक हुनै सक्दैन । त्यो कार्यकारी अधिकारप्राप्त सरकार हुनेछ ।पहिले चक्रीय प्रणालीमा सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति पनि भएकै हो । कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा छलफलका आधारमा निर्धारण गर्न सकिन्छ । सरकार चक्रीय हुन्छ वा एउटा मात्र हुन्छ भन्ने त्यो कहिलेसम्म संक्रमणकाल लम्बिन्छ, त्यसमै भर पर्ने कुरा हो । छोटो अवधिसम्म संक्रमणकाल रह्यो भने एउटै सरकारले निर्वाचन गराउन पनि सक्छ । संक्रमणकाल लम्बियो भने चक्रीय प्रणालीमा पनि जान सकिन्छ । यसको निक्र्याेल सहमतिको आधारमा गर्नुपर्छ ।
बाबुरामजीले राष्ट्र र जनताको अहित हुने काम गर्नुभयो । उदाहरणका लागि नेपाली किसानको हितका निम्ति विदेशबाट आउने कृषि सामग्रीमा सेवा-शुल्क लाग्ने गरेको थियो, उहाँले त्यो हटाउनुभयो । बदनाम र अनियमितताको आरोप खेपेको भारतीय कम्पनी इन्डियन पोटासियम लिमिटेडलाई पुनः मल ल्याउने जिम्मेवारी दिनुभयो । कम तौलको बोरा राखेर मल भित्र्याएपछि अख्तियारले दोषी ठहर्‍याएको र लेखा समितिको छानबिनको दायरामा परेको कम्पनीलाई पुनः जिम्मेवारी दिएर देशलाई ठाडै लुटाउनुभयो । करोडौँको खेलमा उहाँ फस्नुभयो । जुन कम्पनीलाई साम्राज्यवादी भारतबाट समेत लखेटियो र संसारका विभिन्न भागमा पस्नसमेत दिएका छैनन्, त्यसलाई अनुमति दिएर बाबुरामजीले विदेशीको हितमा काम गरेको देखिन्छ । बिप्पा सम्झौता गर्नुभयो । त्यो नेपाली उद्योगी व्यवसायीका हितका लागि नभई भारतीय उद्योगी व्यवसायीका हितमा थियो । सहमति हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । तर, एमाओवादीले सहमतिलाई आफ्नो दुनो सोझ्याउने हिसाबले व्याख्या गर्ने गरेका कारण शंकाको रूपमा हेर्न सक्छौँ । माओवादीले कैयौँ पटकका सहमति उल्ट्याएको छ । आफ्नो हितअनुरूपको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गराउन लगाउने र आफ्नो हितविपरीत रहेको ठानेमा पछाडि हट्ने रोग माओवादीमा छ । त्यसैले ऊप्रति शंका गर्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको हो । यसलाई माओवादीले नै सुधार्नुपर्छ, सहमतिका लागि हामी तयार छौँ । राष्ट्रिय सहमति जहिले जुट्छ त्यही दिनबाट शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको अवरुद्ध काम सुचारु हुन्छ । सहमतिविना अब केही पनि हुने अवस्था नै छैन ।
बहुपहिचानको पक्षमा एमाले
जनजातिका नाममा उठाइएको एउटा संघीयतासम्बन्धी विवाद एमालेको मात्र होइन, सिंगो राष्ट्र र सबै पार्टीको मुद्दा हो । एमालेमा एकल जातीय पहिचानको आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्नुपर्छ वा बहुजातीय आधारमा भन्ने विचारमा मत भिन्नता छन् । जब मुलुक एकल जातीय रूपमा जान्छ, त्यो दिन एमालेले हार्छ । जुन दिन मुलुक बहुजातीय आधारमा संघीयतामा जान्छ, त्यो दिन एमालेले जित्नेछ । केहीले एकल जातीय पहिचानको आधारमा राजनीतिक गर्छु भनेका छन् । उनीहरूले पनि एमालेमा कुनै पनि गुट उपगुट बनाएका छैनन् । एमालेले स्पष्ट रूपमा बहुपहिचानको आधारमा सात प्रदेश बनाउने निर्णय गरेको छ, त्यो नै आधिकारिक निर्णय हो । यसैका आधार पार्टी अगाडि बढ्छ । मौलिक पहिचानका आधारमा संघीय राज्य बन्ने हो ।
निर्वाचन वा पुनस्र्थापना दुवै असम्भव
बाबुरामजीले संविधान पढ्नुहुन्छ कि हँुदैन ? अन्तरिम संविधानभन्दा बाहिर गएर पनि सर्वाेच्च अदालतको फैसला हुन्छ ? यो कुरा बाबुरामजीले बुझ्नुपर्दैन ? अन्तरिम संविधान संशोधन नगरी चुनाव हुँदैन । संविधान संशोधन नगरी चुनावको मिति घोषणा गर्नु मूर्खता हो । अन्तरिम संविधानको रूपमा मैले निर्वाचन गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्ने कुरा जनयुद्धका वेला जनसरकार बनाएर निर्वाचन गर्छु भन्नुजस्तै हो । त्यसो भए पहिले नै निर्वाचन गरेको भए भइहाल्थ्यो नि ।संविधानसभाको पुनस्र्थापना हुनै सक्दैन । संविधानसभाको पुनस्र्थापना किन गर्ने भन्ने कुरा आउँछ । त्यही संरचनाभित्र तिनै मान्छे रहने अवस्थामा जतिपटक पुनस्र्थापना गरे पनि संविधान बन्दैन । संविधानसभा निर्वाचन पुनस्र्थापना गर्नका लागि होइन, नयाँ संविधान जारी गर्नका लागि गरिएको हो । दोस्रो, सर्वाेच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थप्न हुँदैन भन्ने फैसला गरेको छ । पुनस्र्थापना भनेको म्याद थपेजस्तो हुन्छ । अदालतको फैसलाविरुद्ध जान मिल्छ ? अर्काे कुरा, संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने कानुन नै छैन हामीसँग । यस्तो अवस्थामा कसरी हुन्छ संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन वा पुनस्र्थापना ?
अबको विकल्प ः संसदीय चुनाव
अब संसद्को निर्वाचनमा जानुपर्छ । जसरी पहिले संविधानसभाले संविधान लेख्ने र संसद्को पनि काम गर्ने भनिएको थियो अब व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचन गराएर संसद्को काम गर्ने र संविधान लेखन पनि त्यहीँबाट गर्नुपर्छ । संसदीय निर्वाचन गराएर आवश्यक कानुन पनि तयार पार्ने र नयाँ संविधान लेखनका बाँकी काम पनि सक्ने जिम्मेवारी तोक्नुपर्छ । Add new comment थप लेखहरु...
विषालु च्याउबाट कसरी बच्ने ?
विपक्षीले नबुझेको बाबुरामको राजनीतिशास्त्र
वैद्य समूहमा राजावादी झुकाव
असम्भव संविधानसभा पुनस्र्थापना
राष्ट्रपतिलाई विवादमा नतानौँ
प्रधानमन्त्रीलाई आजै हटाउनोस्
तनावमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री
एमाले मनोदशाको पछिल्लो चित्र
संकटग्रस्त वन, भ्रष्ट प्रशासन ज्ञानेन्द्र हुन्छन् नयाँ प्रधानमन्त्री ?
कांग्रेस चुनावबाट भाग्ने पार्टी होइन
संवैधानिक निकायमा शून्यताको खतरा
माओवादी विभाजनको अन्तर्य
संविधानसभा निर्वाचनको औचित्य
« सुरुअघिल्लो919293949596979899100पछिल्लोअन्तिम »	JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL	ताजा समाचार